5 nke ihe ọhụrụ nke iOS 10 nke ị nwere na ekwentị gam akporo gị | Androidsis
Ụnyaahụ WWDC 2016 mere ebe Apple gosipụtara ozi niile maka nyiwe ya dị iche iche. Manzana lekwasịrị anya na ngwanrọ yana mmelite niile maka sistemụ ya dị iche iche, ọ furu efu na ọ nweghị ihe nrụpụta ọ bụla. Ndị na -eso akara a ga -enwe nnukwu ihe omume na -esote, ngosipụta nke iPhone ọhụrụ, na -atụ anya na ha ga -eji ngwaọrụ ọhụrụ weta ozi ndị ọzọ.
Ọ naghị eju anyị anya na nnukwu ụlọ ọrụ na -ekenye ibe ha atụmatụ na ọrụ ha, ọ na -achọkwa ịma na Apple, nke gosipụtara ụzọ ga -aga n'ihu, etinyelarị nkọwa ụfọdụ nke gam akporo na ngosi nke iOS 10. Ọ dịla otu a. anyị na -aga depụta ise nke kacha dị egwu na anyị nwere na gam akporo anyị ruo oge ụfọdụ. Anya na -adọrọ mmasị na -ele anya ka iOS na -adịwanye ka gam akporo yana nke ọzọ.
1 Ngwa ala ala na App Store
2 Ịma ọkwa bara ọgaranya na wijetị na ihuenyo mkpọchi
3 Ngwa foto gị yiri foto Google
4 Ngwa Siri na ngwa ndị ọzọ
5 Iwepu ngwa ala
Ngwa ala ala na App Store
Echiche Google nwere ngwa ala dị na Storelọ Ahịa Google Play bụ ikwe ka ndị ọrụ na -enwetaghị mmelite sistemụ, n'ihi na onye nrụpụta anaghịzi enye nkwado maka ọdụ ụgbọ, hapụ ha. melite ngwa kachasị mkpa. Anyị ahụla Keyboard Google na ọtụtụ ndị ọzọ mechara bụrụ nke etinyere nke ọma, nke m nyere dịka ọmụmaatụ, na -asọmpi na ụfọdụ ndị ọzọ, dị ka SwiftKey, maka okpueze nke ngwa keyboard.
Site na iOS 10, ndị ọrụ iPhone ga -enwe ike budata ngwa ọdịnala site na App Store. Ngwa Apple nwere ugbu a n'ụlọ ahịa ya bụ: ihu igwe, ahịa ahịa, ozi, maapụ, ihe edeturu, ndetu olu, Apple Watch, egwu, ihu igwe, FaceTime, ụlọ ahịa iTunes, kalịnda, kọntaktị, vidiyo, ihe mgbako, kompas na ndụmọdụ.
Ịma ọkwa bara ọgaranya na wijetị na ihuenyo mkpọchi
Onye maara na Apple ga -e copyomi atụmatụ a dị mkpa na ama gam akporo ọbụnadị ị kpọghee ekwentị imepe ngosi ma ọ bụ zaghachi ozi ipso facto na -enweghị nnukwu nchegbu.
Nke a ga -abụ ikpe na na iOS 10 amamọkwa bara ụba na -abata na ọbụna wijetị, ọ bụ ezie na ndị a n'ụzọ kadị elu. Ọmarịcha njirimara gam akporo nke ndị sitere na Cupertino enweghị ike iguzo ịgụnye na ekwentị ha. Ugbu a, a ka ga -ahụ ogologo oge ọ ga -ewe itinye ihuenyo AMOLED iji nweta ọrụ ahụ “na -adị mgbe niile” nke LG G5 ma ọ bụ Samsung Galaxy S7 nwere, wee hụ ọkwa na -enweghị ọbụna ịgabiga ihuenyo mkpọchi.
Ngwa foto gị yiri foto Google
Ngwa ngwa iOS 10 gụnyere ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, mana ha niile yiri otu anyị nwere Foto Google. Ugbu a ngwa gị ga -adị nwee ike ịmata ihu, ihe na ebe ị ga -ekewa ha n'adabereghị na nchekwa ma ọ bụ chọọ ha. Ihe nke anyị ji Google emebu emeworị.
Ọbụna ọ nwere ikike ahụ mepụta akụkọ mgbe ọ matara na enwere foto setịpụrụ nwere mmekọrịta n'etiti ha ịgbakwunye egwu wee si otu a bụrụ akụkọ niile.
Ngwa Siri na ngwa ndị ọzọ
Inwe onye inyeaka mebere nke na -enweghị ike ịkọrọ ndị ọzọ ngwa bụ ihe na -abaghị uru ebe ọ bụ na Apple edozilarị ihe ọhụrụ dị na iOS 10 maka Siri. Ugbu a ị nwere ike jiri ngwa nke atọ ghọta ibe gị nke ọma, yabụ onye ọrụ ọ bụla nwere ike iji iwu olu ziga WeChat ozi.
Njirimara a bụ anyị nwere ugbu a na Google Ugbu a jiri iwu olu maka ngwa ndị ọzọ kemgbe afọ gara aga nke ahụ na-enye anyị ohere izipu ozi site na Telegram na ngwa ndị ọzọ.
Iwepu ngwa ala
A na -akpọ ya dị ka bloatware nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ na -eweta. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na enwere ike ịwụnye ngwa ala, enwere ike ịwepụ ya. A ọhụrụ na ekwuputabeghị site na WWDC mana achọpụtara ya n'ime awa ngosipụta nke iOS 10.
Njirimara a enweworị dị ọbụna na Samsung mgbe ọ mara ọkwa na enwere ike wepu ngwa ụlọ arụnyere. Atụmatụ na -atọ ụtọ ịnwe ebe nhicha dị ọcha maka ngwa ndị ahụ anaghị ejere anyị ozi.
Anyị nwekwara ike ikwu maka ya ọgụgụ isi na ahụigodo, mana anyị ga -enwe nke a mgbe ewepụtara Google Allo, yabụ anyị ka nwere ntakịrị ihe ịnwe ya na gam akporo anyị, n'agbanyeghị na anyị ahụla ka ụmụ nwoke si Google wepụtara ya na I / O 2016.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe 5 ohuru nke iOS 10 nke anyi nwereworị na gam akporo
Ọ bụ faslso na android nwere ike wezuga ngwa ụlọ nrụpụta, ọ nweghị ihe ọzọ zoro ezo mana ọ naghị ewepụ ya na wijetị na ihuenyo mkpọchi dị na nsụgharị ndị gara aga mana ọ dịkwaghị, na tupu ha agwa m onye hụrụ m n'anya, abụ m onye ọrụ. moto g na mbadamba nwere android
Ọ na -egosi na ọ bụ onye hụrụ Martian n'anya (ọ bụghị nkatọ), ọ makwa nke ọma ihe sistemụ arụmọrụ na -eme, agbanyeghị m na -ahụ na ihe dị ka foto adịlarị ruo oge ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ, iPhoto na leoppard ochie nke snow. Mac, na ọtụtụ obere ihe ndị ọzọ, echere m na ụlọ ọrụ ọ bụla na -ewere ihe nke ọzọ na -eme ma melite ya.
Lee ka ios10 si maa mma, yana nghọta na mmetụta blur. Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na android na -edetu ihe, ebe ọ bụ na iphone kemgbe ọ bịara n'ahịa emegharịrị naanị android, ha malitere iyingomi nha ihuenyo, ihe mmetụta mkpịsị aka, wdg…. ọ bụ ihe dị ka oge anyị ga -e copyomi ụfọdụ atụmatụ dịka nsonaazụ ma ọ bụ 3DTouch!
N'ọtụtụ mgbasa ozi ha na -ekwu na iOS 10 depụtaghachiri gam akporo n'ọtụtụ ihe ya! Ekele gị :)
Ọ dị mma, enwere m S7 enweghị m ike iwepu Facebook ma ọ bụ WhatsApp, amaghị m na ha bụ ngwa sistemụ ala.
Google weputara opupu ihe ubi, onye enyemaka nyemaka maka ndi ahia